Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran Oo Doodda Dalkiisa Marinaya Warbaahinta Maraykanka – somalilandtoday.com
Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran Oo Doodda Dalkiisa Marinaya Warbaahinta Maraykanka
(SLT-Washington)-Wasiirka arimaha dibadda Iran, Mohamed Javad Zarif, ayaa socdaalka uu ku joogo Maraykanka uga faa’iidaystay inuu cid kasta oo u dheg jalaqsiisa ka dhaadhiciyo in Iran aanay doonayn in ay Maraykanka isku dhacaan, laakiin ay ka cabsi qabto in is faham la’aani arintaa taa keeni karto.
Zarif oo waraysiyo siiyey warbaahinta kala duwan ee Maraykanka ayaa ku celceliyey eed uu sheegay oo ah in ay jiraan shakhsiyaad ku dhawdhaw Trump oo ku boorriya in uu tallaabo milatari kala hor tago Iran.
Wasiirka ayaa tilmaamay waxa uu ku sheegay koox ka mid ah kuwaas oo si kas ah u abuuraya isaga seeg, oo uu ka mid yahay la taliyaha Madaxweyne Trump ee arimaha nabadgelyada qaranka, John Bolton, iyo rai’sal wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu.
Javad Zarif waxa uu toos u dhaliilay eedaynta maalmulka Trump ee is daba jooga ah ee ay ku sheegto in Iran fadqalallo ka waddo gobolka Bariga Dhexe, waxaanu ku nuuxnuuxsaday in Iran tahay awood ka shaqsaynaysa xasiloonida guud ee gobolka oo dhan.
By Wariye August 11, 2020
(SLT-Hargeysa)-Roob xoogan oo dabayl wata oo Galabta ka da’ay Degmadda Sallaxley ayaa Khasaare kala duwan gaadhsiiyey...
(SLT-Hargeysa)-Guddida doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa hortagay guddida Arrimaha Gudaha, Nabadgalyada iyo Difaaca ee Golaha Wakiillada...
(SLT-Berbera)-Xildhibaan Cabdiwahaab Cali Xaaji Xasan “ Garanti” oo kamid ah Xildhibaanada golaha Degaanka degmada Sheekh ee...